🥇 ▷ Apple waxay ku eedeeyeen inay si khaldan u naqshadeeyeen naqshadeynta kaamirooyinka taleefankooda iPhone-ka ✅
Apple waxay ku eedeeyeen inay si khaldan u naqshadeeyeen naqshadeynta kaamirooyinka taleefankooda iPhone-ka
IPhone 7 Plus wuxuu ahaa mobilkii ugu horreeyay ee Apple marka lagu daro kamarad gadaal laba laab ah. Tan waxaa raacay dhammaan moodooyinka kale oo ay ku jiraan iPhone 8 Plus iyo kuwii ugu dambeeyay ee iPhone XS iyo XS Max. Hadda Apple waa waxaa cadeeyay shirkadda Corephotnics, ku takhasusay rimidda iyo horumarinta muraayadaha indhaha ee casriga, iyagoo ku xadgudbay aaladda kaamirooyinka ee moodeellada iPhone-ka ah. Waxaa la yaab leh, Corephotonics wuxuu ahaa dhawaan ay heshay Samsung
Corephotonics waa shirkad Israel ku takhasustay qaabeynta, horumarinta iyo bixinta noocyada kala duwan, nashqadeynta iyo muraayadaha indhaha si gaar ah loogu talagalay inay ku dhex jiraan taleefannada casriga ah. Shirkadan, oo la aasaasay sanadkii 2012, shirkadaha sida Oppo, MediaTek ama Samsung lafteeda ayaa iskaashi sameeyay oo iskaashi sameeyay. Koreans waxay xireen iibsiga sanadkan ee shirkadda, inay lahaato awood weyn oo ku saabsan qaabeynta kaamerooyinka la hirgalin doono mustaqbalka Galaxy.
Ku xadgudubka 10 rukhsad
Hadda Apple waxaa ku eedeeyey Corephotonics inay jebisay toban rukhsadood shirkadda laxiriirta labada kamaradood ee xaadirka ah ee kujira iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS iyo iPhone XS Max. Sida faahfaahinta baahida loo qabo, Apple He wuxuu wadahadalo la lahaa Corephotonics ilaa iyo 2012, is dhexgalka tikniyoolajiyadeeda mustaqbalka iPhone. Wadahadalada waxaa soo maray dhowr kor iyo hoos, ilaa ay ugu dambeyntii burbureen sanadkii 2017. Intaa kadib, Apple waxaan horay u helay macluumaad badan on teknolojiyada Corephotonics iyo wax yar ka dib kuwa Cupertino bilaabay iPhone 7 Plus leh naqshad laba kamarad.
Shirkadda Samsung ayaa sheeganeysa in dhammaan iPhone oo leh laba kamaradood laga soo jaray iPhone 7 Plus jebinta rukhsadaha Corephotonics. Teknolojiyadaha la sheegay waxaa ka mid ah isbeddel firfircoon oo u dhexeeya ujeeddooyinka, illaa hawlgalka zoom isticmaalaya labada dareemayaasha. Dukumiintiyada ku lifaaqan cabashada ayaa sidoo kale muujineysa in Apple ay ku xad gudubtay aalado la xiriira lenses telephoto yar. Dacwad qaadistu waxay sharraxaysaa in “Apple Waxaan aad uga warhayay rukhsadaha shirkadda, oo ay isku dayeen inay is difaacaan iyagoo soo bandhigaya rukhsado naqshadeyn aad u lamid ah, mararka qaarkoodna wax ka beddelaya rukhsadahaas si ay iyagu ugu gudbiyaan iyaga.
Sheegashada dacwadda, Corephotonics wuxuu codsadaa a Magdhowga magdhawga, marka lagu daro qaadista talaabooyin joogto ah oo lid ku ah iibinta aaladan, marka lagu daro bixinta khidmadaha iyo kharashyada ka soo baxa hawsha. Xilligaan Apple kama uusan hadlin arintaas. Xusuusnow in shirkadda tufaaxa soo bandhigi doonta iPhone-ka cusub ee cusub bisha soo socota, oo leh qaabeyn camera aan gadaal laga shaacin ee shirkadda.